Education pour Tous Ankizy 24 000 no niverina an-tsekoly tao anatin`ny 3 taona
Fampiharana ny PSE Vao mainka hanimba ny zaza Malagasy…
Efa miroso miandalana mankany amin’ny fampiharana ilay drafi-pampianarana vaovao na ny PSE isika eto Madagasikara ankehitriny.
Fanadihadian’ny UNICEF Tsy voahaja ny zon’ny ankizy hianatra eto amintsika
40 %-n’ireo mpianatra eny amin’ny sekoly ambaratonga fototra ihany no mahavita ny fianarany hatramin’ny farany araka ny fanadihadiana nataon’ny UNICEF, satria nisy nahadingana ny kilasy fahadimy.
ASIEF 2019 Hatomboka mialoha ny fifaninanana eto Analamanga
Azo ambara fa fahombiazana tanteraka ny fifaninanana Asief 2018. Hiezaka amin’ny tsaratsara kokoa hatrany izahay amin’ity taona 2019 ity, hoy ny filohany Jhon Love “Andrianarison Jean Aimé Botosera”
EPP Ampefiloha Ambodirano Tena nahomby ny tetikasa fambolena an-drenivohitra
Azo tsapain-tanana ny fahombiazana ka vokatra tsara avokoa no azo tamin’ny fambolena tamin'ny tetikasa " fambolena an-drenivohitra", na “agriculture urbaine”, izay nokarakarain'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA),
Telo volana faharoa mitaky ezaka lehiba avy amin’ny mpianatra
Anio talata 08 janoary indray no hanomboka hiditra an-tsekoly avokoa ireo mpianatra manerana ny Nosy ao anatin’ny fiatrehana ny telo volana faharoa.
Lamaody sy fampihaingoana ny ati-trano Namoakatra mpianatra 400 isa ny ECCOVA
Namoaka mpianatra 400 isa ny “Ecole de Coupe et Couture Volana” eto Antananarivo, tarihin-dRazanamanalina Volana
Ny Pr Ralaisoa Emile Tsy « recteur » ao amin’ny oniversite ACEEM intsony
Araka ny resaka heno dia tsy “recteur”ao amin’ny onivesite Aceem intsony ny Pr Ralaisoa Emile.
Hatramin`ny taona 2015, ankizy 24 000 isa no tafaverina an-tsekoly, 70.000 isa kosa no nahazo sakafo mafana, mpampianatra miisa 9.600 notolorana fitaovana hoenti-mampianatra ary efitranon-tsekoly miisa 128 no voaorina vokatry ny fanohanan`ny firenena norvezianina ny seha-panabeazana.
Ho an’ny taona 2019, vola maherin’ny 6 tapitrisa dôlara no natolotr’ity firenena ity, hanatanterahana an’ilay tetikasa “Fanabeazana ho an’ny rehetra eto Madagasikara” (Education pour tous à Madagascar). Faritra anisan’ny marefo indrindra eto Madagasikara i Androy, Anôsy ary Atsimo Andrefana, raha ny eo amin’ny lafiny fanabeazana. Any amin’ireo faritra ireo mantsy no ambany indrindra ny tahan’ny tsy fidiran’ny ankizy an-tsekoly. Araka izany, dia nanamafy ny fiaraha-miasany amin’ireo rantsa-mangaika telon’ny Firenena Mikambana eto amintsika ny governemantan’i Norvezy, dia ny Tahirin’ny Firenena Mikambana ho an’ny Ankizy (UNICEF), ny Birao Iraisam-pirena momba ny Asa ary ny Fandaharan’Asan’ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo ( PAM). Nisaotra manokana ny governemanta nôrvezianina Atoa Michel Saint-Lot, solontena maharitry ny UNICEF eto amintsika, nandritra ny fifanaovan-tsonia notontosaina omaly teny Andraharo, satria tena zava-dehibe izao fanohanana izao ary efa nahitam-bokany.